Uthi ushaqekile uMgube ngesenzo seGcokama - Ilanga News
Home Izindaba Uthi ushaqekile uMgube ngesenzo seGcokama
Omama abahlola izintombi bakhuza umhlola
UZITHINTELE iziqandu komama abahlola izintombi umculi kamasikandi, uMthandeni “iGcokama Elisha” Manqele, ngokumemezela kwakhe ukuthi usemithise indodakazi yomunye umculi kamasikandi, u-Ali Mgube yaze yamzalela.
IGcokama Elisha liveze ekhasini lalo le-Instagram ukuthi kunengane yalo ezalwe yindodakazi kaMgube njengoba izwe livaliwe, okumele liyoyihlawula ngokukhulu ukushesha ukuze ingakhuleli koninalume.
Emuva kwalokho liyivezile le ngane ezinkundleni zokuxhumana, laveza nendodakazi kaMgube nakuba lingacacisanga ukuthi yiyona yini engunina wengane. UNkz Jabu Mangena wenhlangano ehlola izintombi kwaMai-Mai, eGoli, uBuhle Bezintombi, uthi bashaqekile ngokudicilelwa phansi kwesithunzi sendodakazi kaMgube ekubeni kuyibona abayihlolayo.
Uthi isenzo seGcokama sihlaza izintombi ezihlolwa kule nhlangano.
“Ingane izohamba kanjani nezinye izintombi ikhululeke ekubeni isihlazwe ngalolu hlobo? Le ngane kayikaze ilale nomfana, ihlolwa yithina. Emuva kokuba sizwe le nkulumo yeGcokama, siyithathile ingane yayohlolwa, sathola ukuthi isagcwele kayikaze ilokothwe,” kusho uNkz Mangena.
Uthi isenzo salo mculi siphoxe ngisho imvunulo yenhlangano yakhe esetshenziswa yizintombi eziningi.
Ebuzwa uMgube ngalolu daba, uthe uthuke woma ezwa lezi zindaba futhi usashaqekile.
Utshele ILANGA ukuthi ngeke ajule kakhulu ngale nkulumo ngoba udaba selusingethwe ngomama benhlangano yezintombi okuhlolwa kuyona indodakazi yakhe.
“Ingane ingikhalelile ithi ibona uMthandeni eseyibiza ngomfazi wayo. Ngokwazi kwami ingane yami ngiyikhulise kahle ngenhlonipho nokuziphatha okuhle njengoba ngihlele ukuthi ngiyenzele umemulo ngonyaka ozayo.
“Kubuhlungu-ke uma isithunzi sengane yami sidicilelwa phansi kodwa ngizozwa ngabanolwazi ngamalungelo,” kushu uMgube.
Uthi indodakazi yakhe njengamanje isenyuvesi, ngonyaka ozayo izobe ihlanganisa iminyaka ewu-21 ubudala.
Utshele ILANGA ukuthi emuva kokuzwa lezi zindaba, uyithathile wayihambisa komama ukuze ihlolwe, kwabe sekutholakala ukuthi ubuntombi bayo busathule du.
IGcokama litshele ILANGA ukuthi lizele kwaMgube KwaMaphumulo, kodwa ngeke lingene ligxile endabeni ngoba lihlonipha umuzi womnumzane.
“Kuyiqiniso impela, nginengane kwaMgube, kungenzeka ukuthi yena usafihlelwe njengobaba wekhaya, kodwa ngiwumkhwenyana wakwakhe.
“Kumele abize bonke abazukulu bakhe abazalwe ngesikhathi sikathaqa abhekisise ukuthi akukho yini okusasikhovanyana. Bengilwa impi lena angilwisa yona uMgube, futhi uyalazi iqiniso ukuthi nginayo ingane kwakhe,” kusho iGcokama.
Lithi ukuba uMgube akazange athi linobulili bowesilisa obuncane, ngabe akufikanga kulesi sigaba.
Lithi konke lokhu okwakukhulunywa nguMgube elihlambalaza, akulona iqiniso, kodwa abantu sebeyakukholwa ngoba bazi ukuthi ubephila nalo.
Previous articleUshiye kukhalwa umlilo oqubuke kwamabili
Next article‘Ubulale wagqiba unina ethoyilethi’